एकैपटक जन्मेका तिम्ल्याहा दिदीबहिनी एकैपटक गर्भवती ! – Taja Khawar
एकैपटक जन्मेका तिम्ल्याहा दिदीबहिनी एकैपटक गर्भवती !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २२, २०७८ समय: ९:४१:२६
जुम्ल्याहाको जीवनमा धेरै कुराहरुमा समानता हुन्छ । तर, क्यालिफोर्नियाका एकैपटक जन्मिएका तिम्ल्याहा दिदीबहिनीको जीवनमा भने यस्तो समय पनि आएको छ जुन सामान्यतया अरु जुम्ल्याहाहरुको जीवनमा नहुन सक्छ ।
यी तीनैजना दिदीबहिनी एकैपटक गर्भवती भएका छन् । यी तीन दिदीबहिनीले केही समयको अन्तरालमा पालैपालो सन्तान जन्माउनेछन् । अहिले यी तीन दिदीबहिनी आफ्नो गर्भावस्थाका अनुभवहरु साझा गरिरहेका छन् ।फयी तीन दिदीबहिनीहरुको नाम गिना, निना र भिक्टोरिया हुन् ।
३५ वर्षको यी तीनैजना दिदीबहिनी निकै उत्साहित छन् । उनीहरुले आफ्ना बच्चाहरुमा पनि आफूहरुमा जस्तै प्रेम होस् भन्ने चाहन्छन् । दक्षिणी क्यालिफोर्नियाका यी दिदीबहिनीमध्येकी कान्छी भिक्टोरियाले फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै आफूहरु एकैपटक गर्भवती हुनु सपना वास्तविकता भएजस्तै भएको बताइन् ।
उनले अगाडि भनिन् ‘यो स्थितिमा हामी एक अर्कासँग के खान मन लागेको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ, कत्तिको थकाइ लागेको छ भन्ने जस्ता कुराहरु पनि साझा गर्छौं ।’ भिक्टोरियाकी पहिले नै २ वर्षकी छोरी पनि छिन् । ९ जुलाइमा उनको दोस्रो सन्तान जन्मिँदैछ ।
उनीहरुले एकैपटक गर्भवती हुने योजना भने बनाएका थिएनन् । जेठी गिनाले पिपुल म्यागजिनसँग कुरा गर्दै भनिन् ‘म गर्भवती हुने पछिल्ली थिएँ । मैले इस्टर डिनरमा यसबारे बताउँदा बहिनीहरु चिच्याउन थाले ।
आमाले यो हुनै सक्दैन, के तिमी सिरियस छौं भनिरहनुभएको थियो ।’ गिनाले आफूहरुले यस्तो होला भन्ने कहिल्यै नसोचेकोले अचानक यस्तो संयोग पर्दा निकै उत्साहित भएको बताइन् । उनीहरु ४ मिनेटको फरकमा जन्मिएका थिए ।
Last Updated on: July 6th, 2021 at 9:41 am